Fikambanan-jiolahy :: Ben’ny tanàna naiditra am-ponja • AoRaha
Naiditra am-ponja, tamin’ ny zoma lasa teo, ny Ben’ny tanànan’ny kaominina Ambatoabo, any Taolagnaro, noho ny raharaha halatr’omby an-jatony tany an-toerana. Nahafatesana olona iray sy nandratrana olona teo io fanafihana io. Voalaza fa ny basin’ity ben’ny tanàna no nampiasain’ireo dahalo nitifirina an’ilay olona maty.
“Nisy vavolombelona nilaza ho nahita ny basin’ny ben’ny tanàna teny amin’ireo dahalo nanafika. Natao famotorana ireo vavolombelona ireo. Tsy tao an-tanàna itsy ben’ny tanàna itsy nandritra ny fanafihana. Tsy voavalin’ny ben’ny tanàna ny fanontaniana napetraka taminy mikasika ny antony tsy naha teo an-tanàna azy. Efa nalaina natao porofo eny amin’ny Fitsarana ny basiny”, hoy ny loharanombaovao avy amin’ny Zandarimaria.
Fanoherana fanafahana vonjimaika
Natolotra ny Fitsarana, tany Taolagnaro, ny olona efatra voarohirohy ka isan’ireo ny ben’ny tanànan’Ambatoabo, tamin’ny 20 jolay 2020. Ankoatra ny fikambanan-jiolahy dia voampanga ho namono olona sy nanao fiokoana tamin’ny mpitandro filaminana izy ireo. Nahazo fahafahana vonjimaika avokoa ireo olona efatra taorian’izay.
Nanohitra an’izany fahafahana vonjimaika izany ny Tonia mpampanoa lalàna ao amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany, any Taolagnaro. Namoaka didy fampisamborana an’itsy ben’ny tanàna itsy indray ny Sojaben’ny mpitsara mpanao famotorana, tamin’ny 22 jolay 2020. Voasambotra tamin’ny 24 jolay tokony tamin’ny 6 ora hariva ilay ben’ny tanàna sy ny olona iray. Naterin’ireo zandary avy hatrany any amponja izy ireo. Mbola karohina ireo olona roa hafa.
Faty nihantona tany Sambava :: Lehilahy voampanga ho namono ny vadiny
Fiaraha-miasa :: Novatsian’ny Frantsay fitaovana ny Zandarimaria